Idaacadda Himilo | Radio Himilo
Home / Idaacadda Himilo
Maqal:-Barnaamijka Martida Ramadaanka 22- 6 -2017
radio himilo June 22, 2017	Idaacadda Himilo Leave a comment 150 Views
Maqal:-barnaamijka tartanka qur’aan aqriska bisha ramaadaan ee idaacadda Himilo.
radio himilo June 21, 2017	Idaacadda Himilo Leave a comment 127 Views
Idaacadda Himilo kaalin ayey kaga qaadaneysaa barnaamijkan barashada qur’aanka kariimka, waxaa qabashadiisa taabba-geliyey machadka u adkaysiga musiibooyinka ee magaciisa loo soo gaabiyo SDRI. Halkan hoose ka dhegeyso. Tebintii siddeedaad ee barnaamijka
Maqal:-Barnaamijka Martida Ramadaanka 19 06 17
radio himilo June 21, 2017	Idaacadda Himilo Leave a comment 110 Views
radio himilo June 18, 2017	Idaacadda Himilo Leave a comment 128 Views
Idaacadda Himilo kaalin ayey kaga qaadaneysaa barnaamijkan barashada qur’aanka kariimka, waxaa qabashadiisa taabba-geliyey machadka u adkaysiga musiibooyinka ee magaciisa loo soo gaabiyo SDRI. Halkan hoose ka dhegeyso. Tebintii toddobaad ee barnaamijka
radio himilo June 18, 2017	Idaacadda Himilo Leave a comment 99 Views
Idaacadda Himilo kaalin ayey kaga qaadaneysaa barnaamijkan barashada qur’aanka kariimka, waxaa qabashadiisa taabba-geliyey machadka u adkaysiga musiibooyinka ee magaciisa loo soo gaabiyo SDRI. Halkan hoose ka dhegeyso. Tebintii lixaadd ee barnaamijka
Maqal:-Barnaamijka Martida Ramadaanka 18 06 17
radio himilo June 18, 2017	Idaacadda Himilo Leave a comment 95 Views